LibreOffice 7.0.2 inouya nezvakawanda kupfuura zvigadziriso zana nemakumi matatu zvezvikamu izvi | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice 7.0.2 inouya nezvakawanda kupfuura zvigadziriso zana nemakumi matatu zvezvikamu izvi
Papfuura mwedzi miviri yapfuura, Iyo Gwaro Sisekelo yakakanda kukwidziridzwa kwakakosha kwazvo kuhofisi yako. Akazviita mushure mekukakavadzana, imwe yaive nechokuita nechiratidzo chaiita kuti nharaunda ifunge kuti vaizofanira kubhadhara kushandisa nzira inozivikanwa kwazvo kuOfisi yeMicrosoft. Dzose dzaive alarm dzenhema, asi ivo vakaita kuti iyo label inyangarike, gare gare ivo vakatanga iyo software v7.0.1 uye mashoma mashoma apfuura ivo vaparura LibreOffice 7.0.2.
Yekutanga poindi yekuvandudza yakaunzwa pamusoro pe 80 fixes, uye mune ino software yacho yakave yakanyanyisa kukwenywa, kusvika gadzirisa kusvika pamakumi mapfumbamwe emabhugi izvo zvavakawana mushanduro dzakapfuura. Kana zviri zvemabasa matsva, hapana akaverengerwa, nekuti izvi zvakachengeterwa makuru makuru, ndiko kuti, kana yekutanga decimal yashandurwa kana kana iyo nhamba ichisvetuka senge mwedzi miviri yapfuura.
LibreOffice 7.0.2 haisati yakurudzirwa yezvikwata zvekugadzira
Sezvo zvinowanzo kurairwa, LibreOffice 7.0.2 haisati yakurudzirwa kumatimu ekugadzira. Kusvikira ingangoita yechishanu yekugadzirisa inovandudzwa yaburitswa, Iyo Gwaro Foundation inotaura kuti vhezheni yepamusoro yanyanya kuitirwa vanofarira tekinoroji, avo vanosarudza kunakirwa nezvose zvitsva vasati vaine hanya kana vachizowana glitches kana kwete. Avo vanoda software yakagadzikana vanofanirwa kunamatira kuLibreOffice 6.4.6.
El kuvhura ikozvino pamutemo, asi isingawanzoitika ndiyo kesi kwatinokwanisa kugadzirisa mapakeji matsva kubva kugoverwa kwedu kweLinux izvozvi. Hongu, tinogona kurodha LibreOffice 7.0.2 kubva kune webhusaiti webhusaiti, iyo yatinokwanisa kuwana kubva Iyi link. Mumaawa mashoma anotevera, mapakeji nyowani achaonekwa munzira dzakasiyana dzekumisikidza, kutanga na Flathub, yayo Snap vhezheni kana kugovera iyo inoshandisa iyo yekuvandudza modhi inozivikanwa seRolling Release. Mune kumwe kumwe kugovera, isu tichazofanira kumirira mwedzi mishoma kuti tiise iyo yechinomwe vhezheni yeakanakisa Mahara Hofisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LibreOffice 7.0.2 inouya nezvakawanda kupfuura zvigadziriso zana nemakumi matatu zvezvikamu izvi
GNOME 3.38.1 inosvika nekumwe kuvandudza muMutter uye kumwe kugadzirisa